Qeybta 2aad: Jaamacadda Burco shahaadadeeda heerka koowaad. Sumadaha shahaadadda waxbarasho ee saxda ah.
Tuesday September 07, 2021 - 11:45:57 in Wararka
Jaamacadda Burco waa jaamacadd bulshada Burco samaysatay, waxay diiwaangashantahay jaamacad dawladeed. Hadaba Waxaynu weynayso ku eegaynaa in ay ka soo baxday shuruudihii shahaadadda waxbarasho ee saxda ah (Authenticated certificate). W/Q Dr Bilaal Axmed Cige
Sida sawirka shahaadada kaaga muuqda shaahadadan waxay koobsatay dhamaan qodobadii shahaado sax ah looga baahnaa sida;
Jaamacadda Burco waxaa xafidan shahaadadeeda waxbarasho oo leh dhamaan sumadihii muhimka ahaa. Shahaadadan way adagtahy in lagu samaysto sifo aan sharci ahayn.
La soco qeybta 3aad iyo jaamacad kal.
Dr Bilaal Axmed Cige